(Waxaa laga soo toosiyay Addis Ababa)
Masraxa Adis Abeba
Adiss Ababa () waa Caasimada Dawlada Federaalka ah ee Itoobiya, waana Magaalada ugu weyn itoobiya isla markaasna waa Gobol gaar ah. Micnaha Addis Ababa waa Ubaxa Cusub waxaana Xafiis ku leh Ururka Midowga Afrika, dadka ku nool waa illaa 4 milyan . dadka degan waa illaa 80 isir oo kala duwan oo ku hadla 80 afaf . Waxaana ku yaal Garoon diyaaradeed oo la yiraahdo Garoonka Diyaaradaha ee Bole, asaaskeedu wuxuu ahaa 1886. jooga badda waxay ka sareysaa 2500m . waxayna caan kutahay isu dheeli tirnaan cimilo sanadka oo idil . heer kulkeedu ma dhaafo 16.
2 Mattano Addis Ababa
3 Cimilada Addis Abeba
Iyadoo la raacayo Dastuurka Itoobiya ee 1995, magaalada Addis Ababa waa mid ka mid ah labada magaalo ee federaalka ah ee ka masuul ah Dowladda Federaalka ee Itoobiya. Magaaladda kale ee leh isla xaaladdan waa Dire Dawa oo ku taal bariga dalka, labada magaalooyinkana waxay ku yaalaan Gobolka Oromiya. Horaantii, kadib markii la aasaasay qaab-dhismeedka federaalka ee 1991-kii oo ku hoos maray Axdiga Ku-Meel-Gaarka ah ee Itoobiya, Dawladda Hoose ee Addis Ababa waxay ka mid ahayd dawladaha 14-ka dawladood ee cusub. Si kastaba ha ahaatee, qaab-dhismeedkan waxaa beddelay dastuurka federaalka ee 1995-kii, natiijadaasna, Addis Ababa ma lahan xaalad dowladnimo.
Maamulka magaalada Addis Ababa waxay ka kooban tahay Duqa Magaalada, oo hogaaminaya laanta fulinta, iyo Golaha Magaalada, oo dejiya xeerarka magaalada. Si kastaba ha noqotee, iyada oo qayb ka ah Dowladda Federaalka, Baarlamaanka Federaalka ayaa dejiya sharciyo ku xiran Addis Ababa. Xubnaha Golaha Deegaanka waxaa si toos ah u doorta dadka deggan magaalada iyo Golaha, markaa waxay doortaan Duqa dhexdooda xubnahooda. Xilliga xafiiska ee loo doorto saraakiisha la soo doortay waa shan sano. Si kastaba ha noqotee, Dawladda Federaalka, marka ay u aragto daruuri, waxay burburin kartaa Golaha Magaalada iyo maamulka oo idil oo ay u beddeli karaan maamul ku-meel-gaar ah illaa inta doorashadu socoto. Dadka degan Addis Ababa ayaa matalaya Baarlamaanka Federaalka, Golaha Wakiilada. Si kastaba ha noqotee, magaalada ma matalayso Aqalka Federaalka, taas oo ah aqalka sare ee federaalka ee ay wakiil ka yihiin wadamada xubnaha ka ah. Laanta Fulinta ee Duqa Magaalada ayaa ka kooban Maamulaha Magaalada iyo laamaha kala duwan ee xafiisyada adeegga bulshada.
Duqa magaalada Addis Ababa waa Gudoomiyaha Dimoqraadiyada ee Oromo People's Democratic Organization (OPDO), oo ah xubin ka tirsan Isbahaysiga Xukumadda ee Jabhadda Dibudhiga Dimuqraadiyadda (EPRDF). Mudane Diriba Kuma wuxuu xilka kala wareegay 9kii Luulyo 2013. Wuxuu hore u ahaa Kuma Demeksa (oo sidoo kale ka tirsan xisbiga OPDO), wuxuu muddo shan sano ah ka soo shaqeeyay 30kii Oktoobar 2008. Intii ka horeysay, Dowladda Federaalka waxay u magacawday Mr. Berhane Deressa inuu hoggaamiyo maamulka kumeelgaadhka ah ee ka shaqeeyey laga bilaabo 9kii Maajo 2006 ilaa 30 Oktoobar 2008 ka dib dhibaatadii doorashadii 2005. Doorashadii qaran ee 2005, xisbiga talada haya ee EPRDF ayaa guulo waaweyn ka soo gaaray Addis Ababa. Si kastaba ha ahaatee, mucaaradka ku guuleystay Addis Ababa ma aysan ka qeyb geli xukuumadda labada heer gobol iyo mid federaalba. Xaaladdan ayaa ku khasabtay Dawladda Federaalka ee EPRDF in ay ku wareejiso maamul ku-meelgaar ah illaa iyo inta doorasho cusub la qabtay. Natiijo ahaan, Mr. Berhane Deressa, oo ah muwaadin madax banaan, ayaa loo magacaabay.
Qaar ka mid ah duqayadii hore ee Addis Ababa waa Arkabe Oqubay (2003-06), Zewde Teklu (1985-89), Alemu Abebe (1977-85) iyo Zewde Gebrehiwot (1960-69).
Dhaqanka Qalabka la yaabka leh waxaa ka mid ah Cathedral Cathedral (oo la aasaasay 1896 iyo sidoo kale guriga lagu hayo matxafka), Quduuska Quduuska ah ee Qudduuska ah (marxuumka ugu weyn ee Orthodox Orthodox Cathedral) iyo meesha lagu aasayo ee Emily Haile Selassie iyo qoyska Imperial , iyo kuwa ku dagaallamay reer Talyaani intii lagu jiray dagaalkii labaad ee aduunka. Waxaa sidoo kale jira garoonkii hore ee Imperial ee Menelik oo weli taagan kursiga rasmiga ah ee dawladda, iyo Aqalka Qaranka oo hore loogu yaqaanay Jubilee Palace (oo loo dhisay in lagu calaamadeeyo Boqortooyada Boqortooyada Haile Selassie ee 1955) taas oo ah degaanka madaxweynaha Itoobiya. Jubilee Palace ayaa sidoo kale loo qaabeeyey ka dib markii Buckingham Palace ee Boqortooyada Ingiriiska. Xarunta Afrika waxay ku taallaa dhammaan meelihii Menelik II ee laga soo galo Garoowe halkaasoo ah Xarunta Dhaqaalaha ee Qaramada Midoobay ee Afrika oo xarunteedu tahay sidoo kale xafiisyada QM ee Itoobiya. Sidoo kale waa goobta lagu aasaasay Ururka Midawga Afrika (OAU), oo ugu dambeyntii noqday Midowga Afrika (AU). Midawga Afrika ayaa hadda ku jira xarun cusub oo lagu dhisay meel ku taal xabsiga Akaki Xabsiga, oo ay ku leedahay dhulkii ay ku deeqeen Itoobiya ee ujeedadaas ku lahayd qaybta koonfureed ee magaalada. Tiyaatarka Hager Fikir, oo ah tiyaatarka ugu da'da weyn Itoobiya, wuxuu ku yaalaa degmada Piazza. Dhawaqa Quduuska ah ee Trinity Cathedral waa dhismaha baarlamanka, oo lagu dhisay xukunka Haile Selassie, oo leh minaarad saacadeed. Waxay sii waddaa inay u adeegto sida kursiga Baarlamaanka maanta. Dhamaan Baarlamaanka waa Shengo Hall, oo ay dhistay xukunka Derg ee Mengistu Haile Mariam oo ah hoolka baarlamaanka cusub. Shengo Hall wuxuu ahaa dhismaha adduunka ugu weyn ee la dhisay, kaas oo lagu dhisay Finland ka hor inta aan lagu soo shirin Addis Ababa. Waxaa loo isticmaalaa shirar waaweyn iyo heshiisyo. Itegue Hotel, oo dhisay 1898 (Calendar Calendar) oo ku taal bartamaha magaalada (Piazza), ayaa ahaa hotelkii ugu horeeyay ee Itoobiya.
Degmada Merkato, oo noqotay midka ugu weyn suuqa Soomaliya, waa Masaajidka Grand Anwar ee masaajidka ugu wayn ee laga dhisay dalka Talyaaniga. Dhowr mitir oo koonfur-galbeed ah ee Masjidka Anwar waa kaniisada Raguel oo la dhisay ka dib markii xoriyadii Empress Menen. Dhismaha masaajidka iyo kaniisaddu waxay calaamad u tahay xidhiidhka nabadeed ee dheeriga ah ee u dhexeeya masiixiga iyo diinta Islaamka ee Itoobiya. Kaniisadda Katooliga Katooliga ee Quduuska Quduuska ah wuxuu kaloo ku yaal degmada Merkato. Ugu dhow Garoonka Diyaaradaha Caalamiga ah waa Madhane Alem (Badbaadiyaha Dunida) Orthodox Cathedral, oo ah kan labaad ee ugu weyn Afrika.
Tilmaamo kale oo magaalada ka mid ah suuqa sare ee Mercato, jimicsiga Jan Meda, Xarunta Madadaalada ee Bihere Tsige iyo jidka tareenka ee Jabuuti. Goobaha cayaaraha waxaa ka mid ah Iskuulada Addis Ababa iyo Nyala. Abaalmarinta Afrika ee 2008-dii ee ciyaaraha fudud ayaa lagu qabtay Addis Ababa. Buuraha Entoto waxay ka bilaabmaan xaafadaha waqooyiga. Xaafadaha magaalada waxaa ka mid ah Shiro Meda iyo Entoto oo waqooyiga, Urael iyo Bole (Guriga Bole Internat
[[File:Cathédrale Saint Georges Addis Abeba1.jpg|thumb|right|300px|St George's Cathedral [[File:HagerFikirTheatre.jpg|Thumb|right|300px|Hager Fikir Theatre (April 2006)]]
Mattano Addis AbabaEdit
South Korea Chuncheon,
United States Washington, D.C.,
Cimilada Addis AbebaEdit
Faahfaahin Cimilada Addis Ababa
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro Addis Abeba.
. Csa.gov.et http://www.csa.gov.et/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=421&format=raw&Itemid=606. Soo qaatay 2013-07-20. Maqan ama ebar |title= (caawin)
Liska Gobolada Itoobiya
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Addis_Abeba&oldid=214320"
Last edited on 8 Agoosto 2021, at 10:34
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Agoosto 2021, marka ee eheed 10:34.